Wariyihii caanka ahaa ee Yoonis Cali Nuur oo ku geeriyooday magaalada London, iyo wasaarada warfaafinta somalia oo ka tacsiyadeysay. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wariyihii caanka ahaa ee Yoonis Cali Nuur oo ku geeriyooday magaalada...
Wariyihii caanka ahaa ee Yoonis Cali Nuur oo ku geeriyooday magaalada London, iyo wasaarada warfaafinta somalia oo ka tacsiyadeysay.
Allaha u naxariistee waxaa magaalada London ku geeriyooday Yoonis Cali Nuur oo ahaa Saxafi wax badan kasoo shaqeyey warbaahinta Somalida,
Marxuumka ayaa muddooyinkaan ku xanuunsanaa Magaalada London ee dalka Britian halkaasoo ugu dambeyn xalay uu kugeeriyooday
Yoonis Cali Nuur waxa uu kasoo shaqeyey bari samaadkii radio muqdisho codka jamhuuriyada Somalia. Iyo Wakaalada wararka Qaranka ee SONN, waxana uu waayadan ka shaqeynayey idaacada BBc da laanteeda Afka somaliga.
Siciid Cali Muuse oo kamid ah rugcadaaga saxaafada ee Somalia wax bandanna ay islasoo shaqeyeen marxuumka oo uwaramayey warbaahinta qaranka ayaa sheegay in Marxuumka uu ahaa shakhsi dabeecad leh, Af gaaban oo shaqadiisana ka adag.
“Muddo saddex sano ayaan wax wada baranaynay, Iskuulada Hoose ee Gebileey iyo Cadaadley ayuu iskuul ka dhigtay, markii uu dugsiga sare ka baxay waxa uu tegay Xamar oo uu ku ku biiray Xalane, halkaas ayaa laga qaatay oo uu ku biiray Wasaaradda Warfaafinta, gaar ahaan Wakaaladda SONNA iyo Radio Muqdisho, waxaana uu qori jiray Wararka iyo Faalooyinka” ayuu yiri Saciid Cali Muuse.
“Runtii Yoonis wuxuu ahaa nin aad u dabeecad iyo Akhlaaq wanaagsan, Shaqadiisana kuwanaagsan oo ka adag waxaad ka garaneysaa faalloyinka uu qori jiray ” Ayuu yiri
Yoonis waxa uu ahaa shaqada soo bilaabay 1983 di ayuu shaqada ka bilaabay idaacadda BBcda laanteeda Afka Soomaaliga, halkaasoo uu sidoo kale kasoo ahaa Tababare saxaafadeed.
Allaha unaxariistee waxa uu ka tagay laba xaas iyo kudhaawad sideed carruur ah oo ay ukala dhaleen xaaskaas oo ukala deganaa London iyo hargeysa.
Geeridiisa waxaa kanaxay dad badan oo somaliyed kuwaasoo Tacsi U diray Qoyskiisa, Eheladii iyo asaxaabtii uu ka tagay,
Masuuliyiinta Wasaarada Warfaafinta Dhaqanka iyo dalxiiska ee dowlada Somalia oo ugu horeeyo wasiirka warfaafinta Mudane Daahir Maxamuud Geelle ayaana kamid ah dadka Tacsida udiray marxuumka.
Previous articleGuddiga Taakuleynta iyo wacyigelinta Ciidanka Qaranka Soomaaliyeed oo gaaray Magaalada Johannesburg ee Dalka Koonfur Africa
Next articleRa’iisul Wasaare Khayre Oo Dib Ugu Soo Laabtay Dalka Kana War-bixiyay Natiijada Shirkii Lusaka